Indlu yelali epholileyo yothando
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAdriaan
Le ndlu yothando ikwilali encinci entle emantla eAllier eluhlaza (Auvergne Rhone Alpes). Kule lali kukho ivenkile encinci, ibar-tabac, indawo yokutyela, ikhemesti kunye nevenkile yokubhaka. Ilali ikufuphi nomlambo i-Allier, eyaziwa ngokuba ngamaphenyane amnandi kunye nokuloba.
Indlu ikwi-GR3 Vezelay Route (indlela edumileyo yokuhamba ngeenyawo kubahambi ngezonqulo abaya eSantiago de Compostella).
Endlini yethu awuyi kufumana i-wifi, okanye iTV. Into oya kuyifumana kukuzola, ukuphumla, umculo kunye nemidlalo yebhodi.
Le ndlu inamagumbi okulala amathathu, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela (ishawa, isinki, iWC), igumbi langasese elisezantsi kunye nekhitshi (nefriji, ifriji, i-oveni kunye nomatshini wokuhlamba izitya).
Igumbi lokulala 1: ibhedi encinci yenkosi (140x200cm)
Igumbi lokulala 2: iibhedi ezimbini ezincinci (80x190cm)
Igumbi lokulala lesi-3: ibhedi enkulu enkulu elingana nenkosi (eyotywe 160x200cm)
Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ngefriji, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, i-oveni, isitovu sombane, iipleyiti, iimbiza neepani. Yonke into oyifunayo ukuze uzilungiselele izidlo ezimnandi!
Igumbi lokuhlala lincinci, kodwa likhululekile. Kukho ibhedi, izitulo ezibini kunye netafile enkulu yokutyela. Uya kufumana istiriyo (CD/USB), iincwadi kunye nemidlalo yebhodi.
Imoto, isithuthuthu okanye ibhayisekile inokupakishwa kwintendelezo evaliweyo apho zingayi kubonakala khona xa usuka esitratweni.
Okujikelezileyo kungaphezulu kokufaneleka kwimisebenzi emininzi (yangaphandle). Phantse kuzo zonke iilali kukho ubuncinci iindlela ezimbini zokuhamba ezinokuthi zifumaneke, umlambo i-Allier ufanelekile ukufunyanwa nge-kayak okanye i-cano. Ubugcisa kunye nenkcubeko (kunye nokuthenga) ifumaneka kwizixeko iMoulins kunye ne-Nevers, zombini zilinde ukufunyanwa kwimizuzu engama-30.
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-6. Nangona kunjalo, nceda ugcine engqondweni ukuba kukho igumbi lokuhlambela elinye elinesifudumezi samanzi esinye sokugcina.
Ucoceko yeyona nto iphambili kum. Emva kokuhamba kondwendwe ngalunye, ikhaya lam licocwa ngesicoci somphunga kunye nezinye iindlela zokucoca.
Ukongezelela, yonke ilinen (kubandakanywa neetawuli) ihlanjwe ngemveliso ye-disinfectant (leyo, ngendlela, iphunga elimnandi kwaye ayifani ne-disinfection).
Le ndlu imi kumbindi welali, kanye kwi-GR3, indlela yohambo oludumileyo lokuhamba ngeenyawo ukuya eSantiago de Compostella. Ngokukodwa ngakumbi: iVia Lemovicensis. Enye yeepilgrimtrails ezine eziphambili zaseFransi.
Ekuqaleni kwesitrato kukho icawa yenkulungwane ye-11. Umlambo we-Allier ufumaneka kwi-10 yokuhamba ngomzuzu.
Isitalato esikhulu sinevenkile encinci, ikhemesti, ibar-tabac kunye nerestyu. Oku kumalunga nohambo lwemizuzu emi-3.
Ngexesha leenyanga zasehlotyeni zininzi iiBrocantes (iimarike zentakumba) kwingingqi ye-Allier ngeempelaveki (ezona zininzi zingeeCawe).
Eminye imisebenzi eluhlaza: Foret de Tronçais (elona hlathi likhulu le-oki laseYurophu), umlambo i-Allier (ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukukhwela amaphenyane), iindlela ezingapheliyo zokuhamba, ukukhwela ibhayisekile.
Iisekethe zomdyarho "Michel Tissier" (Lurcy-Lévis) kunye ne "Magny Cours" nazo zikufutshane (uhambo lwemizuzu eli-10 nengama-20 ngokulandelelanayo).
Izixeko ze-Nevers kunye ne-Moulins (kwimizuzu engama-30 yokuqhuba) zinazo zonke izithako zokuchitha ixesha elithile apho: imbali, ubugcisa, i-cathedrals, ivenkile, iindawo zokutyela, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Adriaan
Ndiza kukwamkela ngokobuqu, kodwa ukuba ixesha lokufika likwiyure "engenakwenzeka", kukho isitshixo esikhuselekileyo onakho.
Ndingumpheki ngokorhwebo kwaye ndingakulungiselela ukutya xa ufika, ukuze uzifudumeze. Unokucinga nge-quiche, isidlo sengingqi, njl.
Kukwakho ithuba lokuba ndiqinisekise ukuba unazo zonke izithako ukuze uzilungiselele isidlo sakusasa esifanelekileyo kusasa.
Ndiyavuya ukutshintshiselana ngezimvo malunga neminqweno kunye nezinto ozithandayo kumyalezo!
Ndihlala kuhambo lwemizuzu eli-15, ke ukuba kuyafuneka, ndingaya apho ngokukhawuleza.
Ndingumpheki ngokorhwebo kwaye ndingakulungiselela…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Le Veurdre